TuxGuitar 1.5.5 yakauya kuzogadzirisa tsikidzi, hapana chimwe | Linux Addicts
TuxGuitar 1.5.5 yakauya nenhau dzakanaka… kwete, kungotamba, yaingova "bugfix" vhezheni
Risingasviki gore rapfuura ndakanyora chinyorwa umo ndakatsanangura nzira yekuisa gitare pro 7 palinux kuburikidza nePlayOnLinux. Kana ndikazviita, imhaka yekuti, kunyangwe ndingade, gitare reTux riri kure nePro yakabhadharwa iyo iripo yeWindows uye macOS. Kutanga neiyo interface uye kupera nemanzwi aripo. Asi inogona kutibvisa mujamu, uye kutaura zvazviri kare kare ndakashamiswa nemafambiro aiitwa nekhibhodi yangu inoenderana neMIDI. Nhasi ndaona kuti update ye TuxGuitar 1.5.5, uye hapana zvakawanda zvekunyora kumba nezvazvo.
Hatingati Tux Guitar yakasiiwa, kana kuti dai pasina mwedzi vaburitsa TuxGuitar 1.5.5 beta uye isu tingadai tisisawanikwe. new point update, asi tinogona kutaura kuti hazvizombofi zvakaita izvo vakawanda vedu vangada. Uye kana vakaburitsa vhezheni itsva, chatinoverenga ndechekuti i kusunungurwa kugadzirisa tsikidzi uye hapana chimwe chinhu, hapana, kune avo vanoda chimwe chinhu chiri nani iwe unogona kugara uchidhonza chidzidzo chatakaburitsa muna Chivabvu 2021.
TuxGuitar 1.5.5 inogadzirisa kukanganisa uko vashandisi vaisangana nazvo
Kuverenga pane software forum kuSourceforge, pane zvakataurwa nevanhu vari kutaura izvozvo nyaya dzawanga uchisangana nadzo dzakagadziriswa, saka inogona kunge isiri kusunungurwa kukuru, iyo isiri iyo, asi chero shanduro yakakosha kana ikagadzirisa chimwe chinhu chiri kuita kuti hupenyu hwedu huve hurombo mumapurogiramu atinoshandisa nguva dzose. Kune chikamu changu, ndinongorivhura nguva nenguva kuti nditarise nekukurumidza mamwe mafaera, ini handina kucherechedza chero chinhu, kana chiri nani kana chakashata.
Chingave chakanaka ndechekuti iyo interface igadziriswe zvishoma, uye kana mumwe munhu akaziva yakanaka faira yekuvandudza ruzha, ndapota igovera, vazhinji vedu tingaifarira. Parizvino, TuxGuitar 1.5.5 ndiyo yatinayo (link kune flatthub), uye vamwe vashandisi vakabatsirwa nekuchinja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » TuxGuitar 1.5.5 yakauya nenhau dzakanaka… kwete, kungotamba, yaingova "bugfix" vhezheni
Che..., ibasa risingabhadharwe rinopihwa munhu wese..., tinofanira kupembera nekutenda kuti vakagadzirisa mhosho, kwete kunyunyuta nekuzvidza nekuti “hapana zvimwe zvavakaita”.
Yechipiri yekutarisa yeApple 13 yakatoburitswa
Maitiro ekutora skrini muLinux